सांसदलाई ६ करोड - BirtaJyoti
adminMay 29, 2019 3:17 pm 0
काठमाडौं । सरकारले विकास कार्यमा संघीय सांसदहरुको सहभागिता गराउने भन्दै रकम विनियोजन गरेको छ । सांसदलाई पैसा बाँडेर विकास नहुने भन्दै अर्थविज्ञहरुको चर्को आलोचनाबिच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुलाई ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने निर्णय लिएका हुन् ।
दुर्घटनामा परेका पशुपतिनगरका सुरजको प्रहरीको असहयोगले स्वास्थ्य अवस्था जटिल
admin- July 2, 2019
झापा । इलाम सुर्योदय नगरपालिका –२ पशुपतिनगरका सुरज लिम्बू विएण्डसी अस्पतालको आइसियूमा छन् । बेहोस अवस्थामा रहेका लिम्बूको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । परिवारका अनुसार ... Read More
“म अलप हुन चाहान्छु ”, कता गए प्राध्यापक विष्टका पाईला र पदचाप ?
admin- January 19, 2019
शशिशेखर घिमिरे हो, उहाँ त्यसपछि कहिल्य फर्कनुभएन । हामीले कैयौं दिन र वर्षहरु बुवा फिर्ने आशमा वितायौं । तर उहाँको कुनै अत्तोपत्तो लागेन । नेपालको ... Read More
भारतको तीव्र दबाबपछि विषादी जाँच नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
काठमाडौँं । भारतको चर्को दवावपछि सरकारले भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने पूर्ववत आफ्नै निर्णय परिवर्तन गरेको छ । सीमा नाकामा फलफुल तथा ... Read More
NEWER POSTमदन भण्डारी राजमार्गको बजेट पौने ५ अर्ब
OLDER POSTहुलाकी राजमार्गलाई यसपाली साढे १३ अर्ब
आँखा रोगको बारेमा जनचेतना बढाउन आवश्यक छ : डा मोनिका कर्माचार्य, मेची दिब्यज्योति आँखा अस्पताल
माघको जोडोमा पनि रोपाइँ